पुस्तान्तरणको मार्ग कोर्दै रुपान्तरित कांग्रेस – Himalaya Television
– एकराज पाठक/रासस
२०७८ पुष १० गते १३:४९
१० पुस २०७८ काठमाडौं । बुधबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई अमेरिकी एबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा पत्रकार डेभिड मुइरले सोधे–अर्काे कार्यकालको राष्ट्रपति पदमा उठ्ने यहाँको योजना छ ? बाइडेनको जवाफ थियो–उठ्छु, किन नउठ्नु ? म अहिले जत्तिकै सक्रिय रहे भने अर्थात् स्वास्थ्यले साथ दियो भने उठ्छु । राष्ट्रपति बाइडेन अबका केही महिनामा ८० वर्षमा उक्लिने तयारीमा हुनुहुन्छ । त्यहाँको अर्काे निर्वाचन सन् २०२४ मा हुन्छ र त्यतिबेला उहाँले ८४ वर्ष लाग्ने तरखर गर्दै हुनुहोला ।
काँग्रेस पुस्तान्तरण रुपान्तरित